25 सबैभन्दा कष्टप्रद हिप-हप प्रवृतिहरू
संगीत शीर्ष पिक्सहरू
25 भन्दा धेरै हिप-हप प्रवृतिहरू
by हेनरी Adaso
Rappers आधुनिक दिन कविहरू हुन्। तिनीहरू हामीलाई सोच्न, प्रेम, महसुस, नाच, र एक पोर्टोइड चित्र जस्तै हिला बनाउँदछ। तर कहिलेकाहीँ तिनीहरू क्लबमा छायाहरू पनि लगाउँछन् र महिला खेतहरू लागू गर्छन्। यहाँ सबै समयको 25 भन्दा ठूलो हिप हप प्रवृतिहरू छन्।
25 मध्ये 25
निशुल्क (घुसपैठ रेपर नाम घुसाउनुहोस्) Tees
ट्राफेरिङ कि तपाई वास्तवमा एक रैपर सम्बन्धी हेरचाह गर्नुहुन्छ जसले टूर बसमा घाँस काट्न को लागी बिग्रेको छ। हामी 1 99 8 तिर छौं। हामी तपाईलाई विश्वास गर्दैनौं, तपाईलाई अधिक मान्छे चाहिन्छ। यसबाहेक, कसैले पनि जेलबाट बाहिर निस्क्यो किनकि कसैले उसको नाममा टी-शर्ट किन्नुभयो।
24 मध्ये 25
सबै मिलाउने मिश्रणहरू
© ग्रैंड हस्टल / अटलांटिक
डीजेले सबै गीतहरु चिल्लाएर धेरै मिक्सटेपहरू प्रस्तुत गर्न व्यवस्थित गरेका छन्। समान रूपमा कष्टप्रद गर्दा चिल्लाउँदा 11 चोटि एउटै गीत पुन: उल्टाइरहेको छ "बिरुवा कि ती SH * टी ब्याक!"। यदि मैले 10 सेकेन्डको एउटै गीतको बारेमा सुन्न चाहानुहुन्छ भने, म आफनो लान्ड रेन्ड बटनमा हिर्नेछु। धन्यवाद।
23 मध्ये 25
गौतम बिरोध सामान्यतया महिला सशक्तिकरण साहित्यको रुपमा प्याकेज गरिएको छ, र यो केवल एकदम सानो छ, ब्रेक। म सक्दिन।
22 मध्ये 25
कहिलेकाहीँ नासले आफ्नो बच्चालाई इम्मेटिकको आवरणमा राखे, रप्परले यो चाललाई गोर्खाली बनाएको छ जस्तो कि तिनीहरूको सम्झौतामा अनिवार्य छ। यो नवीनताबाट आएको सबैभन्दा खराब हिप-हप एल्बम कवर क्लिचहरूमा ।
21 मध्ये 25
नयाँ संगीतको साथ फ्लुड ब्लगहरू
यो एकदम नयाँ फिड हो जुन लिल वेनको साथ सुरु भयो। वेन 2006 बाट 200 भन्दा बढी गीतहरू देखा पर्यो। क्रोको मैले आफ्नो साप्ताहिक फ्रीस्टाइल सीरीजसँग एक टच गरे। दुवै कलाकारहरू उनीहरूको प्रयासमा सफल थिए। वेनी थिया कार्टर III को एक जुलियन प्रतिमा बेच्न गएका थिए, जबकि क्रोकले आफैंलाई जीवित सर्वोत्तम गीतकारहरूको रूपमा स्थापित गरे। उनले भने, नयाँ रैप्टरहरूलाई ध्यान दिनको लागि एकमात्र तरिका सोच्न लगाउँदा बढी संगीत बनाउनको लागि। यदि यो सुन्न लायक छैन भने, परेशान नगर्नुहोस्। गुणवत्ता ट्रम्प्स मात्रा।
20 मध्ये 25
क्र्यासिंग पुरस्कार शो
केनी VMA रैंट। © गेट छविहरू
जब ओडीबीले वाम तांगमाथि पफ ड्याडीको विजयको विरोध गर्न ग्रैमीहरूलाई पराजित गर्यो, उसले तथ्याङ्कलाई जोड दिए। हिप-हप इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो समूहको अगाडी कुनै पनि हिप हप हेड डिडिटीको दर छैन। यी दिनहरू, स्ट्रिङ क्रिसिङ समाचार चक्र अपहरण गर्न र नयाँ परियोजनाहरूको लागि प्रचार ड्रम गर्न बहाना हो। यो अब "जी" चाल भन्दा एक गाईकोट हो।
19मध्ये 25
मानिसहरु लाई लरेन हिल लाई एक कलाकार को एक उदाहरण को रूप मा जान्छ जो रैपिड र आर एन्ड बी दुवै सफलतापूर्वक जगेडा दिए। त्यसैले त्यहाँ त्यहाँ सुरू गरौं। एल बूगी र आजको गाउको रैप्टर बीचको भिन्नता यो हो कि उनीहरु दुवै कुरा धेरै राम्रो हुन्छ। ड्रेक भट्टराई राम्रा छन् र राम्रो हुन्छ, तर सबैले हामीलाई कान को प्रदूषकहरुलाई बचाउन आवश्यक छ जुन गीतहरु को लागि पारित गर्दछ। त्यहि गायकहरूका लागि जान्छ जसले रैपमा डुबाउँछ (तपाईलाई हेर्दै, क्रिस ब्राउन)।
18 मध्ये 25
क्लब मा धूप का चश्मा
कुनै पनि भन्छन् "म एक रैपरक हुँ" जस्तै एकदम घिमिरे कोठामा धूप का चश्मा। तिनीहरू आउँछन् किनभने तिनीहरू आउँछन्। बन्द गर।
17 मध्ये 25
"माइगोस प्रवाह" प्रयोग गर्दै
रसिस जे यो सुरु भयो। ड्रेक यसलाई मुद्रीकृत गरियो। माइगोस लोकप्रिय भयो। अब सबैले यसलाई काट्यो। सबैले यो प्रवाह रिटायर गर्न सहमत हुनुहोस्। अहिले।
16 मध्ये 25
कपडा लाइनहरू शुरू गर्दै
त्यहाँ त्यहाँ केही सभ्य हिप हप कपडाहरू लाइनहरू छन्, तर धेरै नयाँ लाइनहरू रोकोवेयर र फ्याट फारज जस्ता स्टपलहरूको नखोलो हुन्छन्। म कहिल्यै बुझ्न सक्दिन किन एक सम्झौताको साथ प्रत्येक रस्परले कपडा लाइन सुरू गर्न आवश्यक छ भनेर सोच्दछ।
15 मध्ये 25
कोनी सेक्स प्यान्स
ललीपप। आइंस्टीन। जनी कोचर। डोम। कुकी। कुकी दानव। तपाईं हिप हप सेक्स प्यान्स को बाहिर एक पूर्ण शब्दकोश बना सकते हो। यो मौखिक सेक्स को बाहिर प्यान्स स्पिन गर्न एक रैप स्पोर्ट को केहि छ।
14 मध्ये 25
© Frazer हैरिसन
हिप-हप फैशनेबल अनिवार्य हुन सक्दछ बिना आवश्यक लङ्ग। Fellas, हामी सबै शर्टहरूलाई कपडा जस्तो देख्नलाई रोक्न सहमत हुन सक्छौं किनकी तिनीहरू सबै घुँडामा तल जान्छन्? जब तपाईं एक लाख पटक हेर्न फारम-फिटिंग फिचरमा राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ ओभरटेस्ट कपडा किन लुकाउनु हुन्छ?
13 मध्ये 25
© Aftermath / Interscope
स्वाभाविक रूप देखि, rappers avid आत्म प्रमोटरहरू छन्। र त्यो स्व-पदोन्नतिको भाग निश्चित छ कि तपाईंको संगीत तपाईंको दर्शकमा पुग्छ। दुःखको कुरा, यो पनि एक एमपी3को 30-सेकेन्ड स्निपेटको लागि 3-मिनेट ट्रेलर रिलीज हुन सक्छ जुन एल्बमबाट अवस्थित हुन सक्छ वा अनावश्यक रूपमा धकेल्न सकिँदैन।
12 मध्ये 25
लुसी क्र्रोसर उत्पादहरू
हामी यो प्राप्त गर्दछौं। सीडी बिक्री abysmal हो र संगीत उद्योग घुटनों मा छ। त्यसकारण, राफरहरूले राजस्वमा ल्याउन अन्य तरिकाहरू खोज्छन्। तर यो कन्डोमको एक ब्रान्ड जारी गर्न कुनै बहाना छैन जादुई स्टिक भनिन्थ्यो।
11 मध्ये 25
Autotune एक स्याहार को लागि एक vocal वृद्धि देखि गए। जे जेले "तातो ओटोट्युन (डोए)" मार्फत आफ्नो तामाङमा कील ड्रिल गर्ने प्रयास गर्यो। दुर्भाग्यवश, यो rappers यन्त्रबाट टाढा राख्न पर्याप्त थिएन। जे भए पनि धेरै दूर हेर्न को लागी हेर्न को लागी Autotune प्रासंगिक राख्ने। उनको केटा केनी वेस्टले आफ्नो आवाजको साथमा सम्पूर्ण एल्बम बनायो।
10 मध्ये 25
रिक रसले यसलाई बीआईटीमा सेतो बीट अवार्डमा गरिरहेको छ।
Hustler ethos हिप हप मा सबै भन्दा खराब प्रवृत्ति मध्ये एक हो। घोस्टफेसले एक पटक फडर साक्षात्कारमा सोधे, यदि यी रैप्टरहरू मारिएका हुन्छन् भने कतिजना मानिसहरू उनीहरूको दावी गर्छन् कि उनीहरूले अझै पनि कसरी हिंडिरहेका छन्? म तपाईलाई OG आइस क्यूबका बुद्धिमान शब्दहरूको साथ छोड्छु: "सबैलाई हल्लाउँदैछ, कसैले रैछैन।"
09 मध्ये 25
हिप हप वास्तविकता देखाउँछ
तपाईं वास्तविकता एक रैपरक हुनुहुन्न जब सम्म तपाईं एक वास्तविकता शो मा गएनन्। यो एक पक्का यो राप मा बनाउन वा एक किने क्यामेरा पुन: संशोधन गर्न एक तरिका हो। र जब देखि टिभी पैसा सीडी रकम भन्दा सामान्य छ, सबैले केकको टुक्रा चाहन्छन्।
08 को 25
जेनेरिक संगीत भिडियोहरू
2000 को प्रारम्भमा, होप विलियम्सले शूटिंग संगीत भिडियोको नयाँ तरिका अग्रगामी गरे। विलियम्सले फिसहेई लेन्सलाई रोजेर क्यामेराको केन्द्रीय फोकस विकृत गर्यो र कहिलेकाहीँ अनौठो असरका लागि उनीहरूको अभिनेताको फ्रेम बढायो। हाइपले उनको धेरै भिडियोहरूमा केही सुन्दर मोडहरू पनि समावेश गरेको छ। प्यासी निर्देशकहरूले उनको शैली लिनुभयो र पर्स स्प्रिचर्स जस्तै भागे। केपकोटले घाइते रूपमा डेम-ए-दर्जन मोडेलहरू गजल गरे, उनीहरूले ह्यापको निर्देशकीय प्रविधिलाई के त्यस्तो बिर्सनुभयो: उत्पत्ति।
07 मध्ये 25
म यससँग KRS-One सँगै छु। फ्रीस्टाइलको सम्पूर्ण बिन्दु हो कि तपाईं हो, राम्रो हो, भित्तामा। हुनसक्छ, लिखित फ्रीस्टाइलहरूको लागि नयाँ वर्ग सिर्जना गर्ने समय हो। समान रूपमा शर्मिला: एक नोटप्याड लडाई ल्याउँदै।
06 को 25
नकली बीफ सुरु गर्दै
50 Cent vs Kanye। © केन सर्नी / गेट छविहरू
युवा पादव्सले क्रोधको शरिरतया भागमा उनीहरूको सल्लाहकारलाई बदलिदिए जुन पछिल्लो 10 साता वा त्यस्ता हजुरबुबा हिप-हप प्रवृतिहरू मध्ये एक हो। यो खेल टमाफुलरीको लागि कुख्यात छ, 50 सेन्ट, डा। ड्रे र जे जेसँग युद्ध भएको थियो। मैले सोधेँ कि उनीहरूले यो क्यारियरमा निर्भर गर्दैनन् भने यो बाटो लागेन। बढि »
05 मध्ये 25
दिशात्मक नृत्य गीतहरू
© हेनरी एडोसो / About.com
कृपया मलाई मेरो हात हावा मा फेंक र Stanky Legg गर्न को लागी बताइयो। यदि मैले पर्याप्त गीता गीत फेला पार्छु म मेरो टेलिफेर हिलाउनेछु। दिशात्मक नृत्य गजल धेरै थकित र कष्टप्रद छन्। तिनीहरूलाई हिप-हपबाट स्थायी रूपमा सेवानिवृत्त हुन आवश्यक छ।
04 मध्ये 25
न्यू यॉर्क फिर्ता ल्याउँदै
(फोटो © स्टीफन ल्किकिन्की / गेटी छवियाँ)
न्यू यॉर्क हिप-हपले विधेयक Cosby भन्दा बढी नकली मृत्युको सामना गरेको छ। हरेक वर्ष, न्यू यर्कको सिर एक न्यूजर्कका प्रमुख एक न्यूनर्क रैपिड मात्र हो तर एक दिन के जुनसुकै आवाज को पछि दोस्रो केला हो भन्ने बारे माटोमा जान्छ। त्यसपछि न्यू यॉर्क रैपिड एक युवाले घोषणा गरे कि उनी वा एक्लै हल्लामा यो कुरा सुनिश्चित गर्दछन् कि बिग एप्पल फेरि शीर्ष केला हुन्छ।
03 को 25
Rappers यसो भन्छ कि तिनीहरू एक आन्दोलन सुरु गर्दै छन्
यदि तपाईले कुनै आन्दोलन सुरु गर्नुभयो भने तपाईं वास्तवमा एक रैपरक हुनुहुन्न। यो कलाकारको रूपमा मान्य गर्नको लागि संगीत पर्याप्त छैन; यदि तपाई हिप-हप हल्लाउन ठूलो आचरणको विस्तारको रूपमा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ भने मात्र यो मात्र आदर गर्नुहुनेछ।
महिला अधिकार = आन्दोलन
Bugatti Boys = एक आंदोलन छैन
02 को 25
© विश्वव्यापी संगीत समूह
हिप-हपले misogyny आविष्कार गरेन, तर यो जीवित राख्न को लागि helluva धेरै गरिरहेको छ। र यो महिलाहरू एच शब्द वा बी शब्द वा अन्य विनाशकारी सर्तहरू बोलाउन बाहिर जान्छ। मिशोगिनिले संस्कृतिमा धेरै रूपहरू लिन्छन्। मलाई आशा छ कि, तर म दिनको लागि हेर्छु जब मुख्य चीफ विशेषको जस्तो रेखाहरू: "तपाईं मलाई एफ-सीके गर्न दिनुहुन्न र म तपाईंलाई लाग्छ / तर तपाईले मेरो डी-सीके चूसाउनुभयो, वा म मर्नेछु तपाईं "अब हिप हप संस्कृतिको अंश होइन।
01 को 25
नयाँ पीढीलाई ब्ल्यामिंग गर्दै
यहाँ नयाँ कुरा छैन। प्रत्येक पीढीले संसारको बारेमा सोच्दछ। र हरेक पीढी आज चीजहरू आजको लागि वर्तमान पीढी को दोषी ठहरिन्छ। केपीएस-एक बनाइने नेल्ली सम्झनुहोस्? उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। यो पूरी तरह एक हिप हप कुरा होइन, तर यो धेरै हिप हप कुरा हो।
सर्वश्रेष्ठ फुटबल गीतहरू
शीर्ष 10 महानतम बूढे नृत्य गीत र क्रेज
50 बेस्ट जे कोल गीत
सर्वश्रेष्ठ वृश्चिक एल्बमहरू
शीर्ष सबैभन्दा प्रभावशाली ग्रंज बाँदर
एल्विसको जस्तै आवाज
2009को सर्वश्रेष्ठ रक गीतहरू
शीर्ष 10 एकोन गीतहरु
शीर्ष 100 पप गीत 2006
केने वेस्ट जस्तै शीर्ष7उत्पादकहरू
शीर्ष 10 स्नातक गीत - 2010
स्पाइडरको विशेषताहरूको बारेमा सबै
न्यु-रउज - बहाई र जिरेस्टियनियन नयाँ वर्ष
पाइनल ग्लेन्डको प्रकार्यको बारेमा जान्नुहोस्
अफ्रिका अमेरिकन विज्ञानमा
ध्वन्यात्मक अंग्रेजी हिज्जेहरूको साथ चित्रित गुरुगुची शब्द
वाल स्ट्रीट युद्ध Erie रेलमार्ग नियन्त्रण गर्न
Concussions को कम गर्न को लागि3सर्वश्रेष्ठ फुटबल हेलमेट
एम्ब्रोनिक स्टेम सेल रिसर्च को प्रो र कन्
मसीही संगीत उद्योगमा काम खोज्दै
फ्रान्समा खरिद जानुहोस्: यहाँ आधारभूत शब्दावली तपाईलाई चाहिन्छ
Grinnell कलेज प्रवेश
शनि लौट र ज्योतिष मा यसको महत्व
अपोपेशन र स्पेनिश मा शब्दहरु को कतरन
बेल्टेन फायर धूप
पियानो म्यान: बिली जोएल
के यो पेंटबलले हिट हट्छ?
नमूना एमबीए सिफारिश पत्र नेतृत्व प्रदर्शन
10 सिक्न रमाइलो बनाउने तरिका
डेरिक टोड ली
जिमनास्टिक्स लक्ष्यहरू सेट गर्न5चरणहरू - र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने
इटालियन Verb Conjugations: Ricordare
अद्वितीय मार्च छुट्टियाँ र मजेदार तरिका तिनीहरूलाई मनाउन
Cambio de Numero de Seguro सामाजिक धोखाधडी द्वारा
तथ्याङ्कमा पैरामीमेट्रिक र गैर-पारम्परिक तरिका
एक कथा कस्तो छ?
विद्यार्थी इक्विटी र संलग्नता बढाउन शिक्षण रणनीति